RAHARAHA “FREQUENCE PLUS” : Tompon’andraikitra ny Mpitandro ny filaminana sy ny lehibeny
Miantso ny tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Tafika sy Zandarimariam-pirenena, izay saro-piaro amin’ny haja sy hasin’ ny foloalindahy, handray ny andraikiny sy ny fepetra rehetra ilaina, ho an’ny Tanindrazana sy ho an’ny lalàna. 19 mai 2010
Manoloana ny habibiana nitranga teny amin’ny 67 ha, tao amin’ny Radio “Fréquence Plus”, ny asabotsy 15 may tolakandro teo, ny antoko sy fikambanana politika miisa telopolo, miara mientana ao anivon’ny HPM dia nanaovanay resadresaka ka nanamarika sy manao antso avo izy ireo. Dr Joseph, izay anisan’ireo voaratra no nisolontena ny HPM.
Ino Vaovao (INV) :
Olon-tsotra ve sa mpitandro ny filaminana no tonga “nanafika” anareo tao amin’ny radio “Fréquence Plus” ?
Dr Joseph :
Voaray ary voarakitra ny fanambarana nataon’ny Colonel Richard Ravalomanana, izay nilaza fa “éléments en service commandés des forces de l’ordre” no nandratra ireo mpanao politika sy mpanao gazety, izay nanao famelabelaran-kevitra tao amin’ny radio “Fréquence Plus”, izany hoe mpitandro ny filaminana izany no tonga tao amin’ny “Fréquence Plus”.
Mampatsiahy fa roa andro alohan’iny tranga iny, dia nampitandrina ny antoko politika ny Praiministra fa handray ny andraikiny, ka tsy hanana “état d’âme” amin’ny mpanao politika tsy mitovy hevitra amin’Andriamatoa Andry Rajoelina.
Iza izany no tena tompon’andraikitra tamin’iny zava-doza izay nitranga iny ?
Ao anatin’ny firenena repoblikanina dia andraikitry ny fanjakana ny miaro ny aina sy ny fananan’ny olom-pirenena rehetra, tsy ankanavaka. Tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny lehiben’ny foloalindahy, dia ny filohan’ny HAT, ny minisitry ny fiarovana, ny lehiben’ny mpitandro ny filaminana.
Manameloka iny fihetsika nataon’ny mpitandro ny filaminana izany ianao ?
Izaho sy ny antoko izay misy ahy, ny HPM, manameloka amin’ny heriny rehetra ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana amin’ny fandravana sy fanimbana fananan’olona indrindra ny famonoana mpanao politika sy fidarohana mpanao gazety. Ambaranay ho ren-tany sy ho ren-danitra, fa tsy maintsy hatolotra ny fitsarana ireo nahavanon-doza sy nanao ny habibiana ; indrindra ireo nanome baiko sy ireo naniraka.
Ny teninao farany Dokotera ?
Ny HPM dia hanara-maso akaiky ary hatramin’ny farany ny fizotran’ny raharaha.
Miantso ny tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Tafika sy Zandarimariam-pirenena, izay saro-piaro amin’ny haja sy hasin’ ny foloalindahy, handray ny andraikiny sy ny fepetra rehetra ilaina, ho an’ny Tanindrazana sy ho an’ny lalàna.
Miantso ny lehiben’antoko saropiaro amin’ny Tanindrazana iombonana, hifanatona haingana, hiaro ny fahafahana, ny Demokrasia sy ny Zon’olombelona satria masina ny Tanindrazana.
Resadresaka noraisin’i Raleomboananana